Umvelaphi kunye Nentsingiselo YOMBHALA Igama lokugqibela
I-BOYLE Igama lokugqibela igama kunye nomsuka:
Uhlobo lweOBOYLE, oluvela kwi-Irish Ó BAOGHILL. Ngokungaqinisekanga, kodwa igama eligqityiweyo likaBoyle liqwalaselwa lulona ukuba lidibaniswe ne-Irish geall , elisentsingiselo esithi "isibambiso" okanye "isibambiso esingenanto," okanye sicinga ukuba "sinamathembiso anenzuzo."
I-O'Boyles yayingumphathi eDonegal, elawula entshona ye-Ulster kunye nee-O'Donnells kunye nee-O'Doughertys. I-Boyles inokufumaneka kwi-Kildare nase-Offaly.
I-BOYLE ingomnye wama- 50 aqhelekileyo ama-Irish ase-Ireland namhlanje, kunye ne-84 eyaziwayo igama elidlulileyo eScotland .
Igama Igama: Isi-Irish , iScottish
Igama elongezelelweyo Igama lokuchazwa : IZINTLU, I-BOYLE, O BAOIGHILL, O BAOILL
UClan Boyle eScotland uvela kwii-Anglo-Norman knights eziphethe i-Beauville okanye, ngokuqhelekileyo, igama elithi Boyville eBevilleville, kufuphi neCaen. Bakholelwa ukuba bafike eScotland emva kokunqoba kuka-Norman e-England ngo-1066. Kukho irekhodi likaDavid de Boivil eshumayela ubungqina kwi-charter ekuqaleni kwe-1164. Ekuqaleni, igama lavalwa kwindawo esezantsi-ntshona yaseScotland apho ebizwa ngokuthi "isitya." Iipelo zepelenti nazo zatshintshwa ngokuhamba kwexesha, kunye nohlobo olutshitshiweyo lwe-Boyll oluvela ngo-1367 no-Boyle ngo-1482.
Umhlaba ojikeleze uKelburn Castle e-Ayrshire uye waba ikhaya likaClan Boyle ukususela ngekhulu le-13, kwaye ngoku uhlala kwi-10 ye-Earl yaseGlasgow, uPatrick Robin u-Archibald Boyle.
Inkolelo yeBoyle nguDominus kuthiwa ibhekiselele ukuba "uThixo uya kunika."
Isebe lee-Boyles elivela eKelburn laqalwa e-Ireland kwaye ekugqibeleni laba yi-Earls of Cork. URichard Boyle (1566-1643), 1st Earl of Cork, wayeyiNkosi yoNondyebo woBukumkani baseIreland.
Abantu abaPhezulu abane-BOYLE Igama lokugqibela:
URobert Boyle - Usosayensi ozalwe ngu-Irish, kunye nendodana ka-7 kaRichard Boyle, u-Earl weCork
TC Boyle - umbhali waseMerika kunye novelisi
UWillard S. Boyle - isayensi ye-physics yaseCanada
USusan Boyle - iScottish wazalelwa umculi owaziwayo odumile yiBritani's Got Talent
Izibonelelo zoGenesalogy for the BOYLE Igama lokugqibela:
Intsapho yeBhoyle Igama lomsebenzi weDNA
Le projekti yamahhala isebenzisa iziphumo ezivela kwi-Y-DNA yokuhlola ukubeka imephu ngabanye ngefayile yeBoyle kumasebe ahlukeneyo yomthi wasekhaya kaBoyle. Ukujoyina iphrojekthi kukuvumela ukuba uhlalutye kwi-DNA.
Igama leBritish Profiler - Ukusasazwa kwegama likaBoyle
Ukulandelela ijografi kunye nembali yeBhoyle igama lokugqibela ngokusebenzisa le nkcukacha ekhompyutheni ye-intanethi esekelwe kwiprojekthi yaseYunivesithi yaseLondon (UCL) yophando lokwabiwa kwamagama kwi-Great Britain, zombini yangoku kunye neyembali.
I-Forum yeBenley Genealogy Forum
Khangela le ngqungquthela egqithisiweyo yokuzalwa komnxeba weBhoyle igama lokugqibela ukuze ufumane abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho webheno yeBoyle.
Uhlobo lweNtsapho -I-BOYLE Genealogy
Iziphumo zewebhu ze-FamilySearch ezingaphezulu kwezigidi ezi-1.3 zegama legama leBhoyle, kubandakanywa iirekhodi zeembali, imibuzo kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca.
I-BOYLE Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lweentsapho
I-RootsWeb ibamba amanqaku amaninzi angabhalwa ngabangcwaningi begama leBoyle.
DistantCousin.com - I-BOYLE Genealogy & History Family
Hlola iziqulatho kwiinkcukacha zolwazi kunye nemithombo yolwazi yohlobo lwegama loBeyle igama lokugqibela.
I-Genealogical Publishing Company, ngo-1997.
I-HARVEY - Itsho igama kunye nemvelaphi
7 Iimoto eziGcini zeKamva: Yintoni esiya kuqhuba ngayo ngo-2025?
Amanqaku entetho: I-Apostrophe njengeCandelo leNcwadi
Iimboniselo ze-Funniest Animated zexesha lonke
Isikhokelo kwimithetho yeJedi elawula umtshato
Ndingaba njani ngongcali?